Cayaaryahan caan ka ah brazil oo gacanta lagu dhigay markii uu mudo Wanted ahaa oo lagu raad joogey+Sawiro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Cayaaryahan caan ka ah brazil oo gacanta lagu dhigay markii uu mudo Wanted ahaa oo lagu raad joogey+Sawiro
Weeraryahankii hore xulka qaranka Braziil iyo kooxo badan oo kala duwan Adriano ayaa gacanta lagu dhigay kadib markii in mudo ah ay ku raad joogeen Booliska ladagaalanka Daroogada magaalada Rio de Janeiro waxaana laqabtay cayaarayahankaaan maalinkii Talaadada ee aan soo dhaafnay.
Adriano ayaa lasheegay in dhaqso maxakamad loo soo taagi doono waxaana lagu eedeeyey cabista iyo kaganacsiga daraagiska mamnuuca ka ah dalka Braziil waxaana ninkan maxakamadi amartay in si dhaqso ah loosoo qabto waxa uuna in mudo ah ahaa Wanted ay aad u raadinayeen Boolisku.
Cayaaryahankaan ayeysan ahayn markii koowaad ee lagu eedeeyo kulug lahaanshaha koox gaangis ah oo kanacsata daroogada ee horay ayaa dhawr jeer Su aalo looga weydiiyey arimahaan loona soo qabtay waxaana lasheegayaa in hadii lagu helo danbigaan uu muteysan doono 10 sano oo xabsi aan cafis lahayn ah.
Weeraryahankaan ayaa hada waxa uu da ahaan jiraa 32 sano waxaana uu beryahaan ahaa baagamuundo inkastoo uu heshiis lagaarey kooxda heerka labaad ee dalka France Le Havre isagoo qorsheynayey in uu u duulo dalkaas balse waxaa laga qaaday baasaboorkii waxaa kaloo lasheegayaa in kooxda Le Havre ay shaacisay in ay kalaabatay heshiikii ay lagashay Adriano.
Sikastaba Cayaaryahan Adriano ayaa waxaa uu u soo cayaaray kooxo badan oo caalamka ah waxaana kamid kooxihii uu soo maray Flamengo Inter Milan iyo AS Roma waxa uu sidoo kale soo maray xulka qaranka Braziil.